Shiinaha ugu fiican soosaarka cabbirka cabbirka cabbirka kaladuwan ee madaxa hekshka dhulka hoostiisa la taaban karo soosaaraha bool-saaraha iyo Warshadda | Feejignaan
Shiinaha wuxuu soosaaraa cabbirka cabbirka cabbirka kaladuwan ee kaladuwan ee birta ah
Flange handarraabbadeedu waxay ka kooban yihiin bool isku-dhafan oo ka kooban laba qaybood: madaxa laba-geesoodka, flange (goomaha ka hooseeya hexagon-ka iyo hagaajinta hexagon-ka) iyo daboolka (silsiladda leh dunta dibadda), oo u baahan in lagu waafajiyo lowska.
Si loo dhejiyo qaybaha isku xidha laba godad.
Marka labaad, isticmaalka handarraabbadeedii flange laba geesoodka ahaa
Madaxa balka laba geesoodka ah ee laba geesoodka ah wuxuu ka kooban yahay laba qaybood: madaxa hexagonal iyo dusha sare ee flange. Aaggeeda "aagga taageerada ilaa culeyska aagga buuqsan" way ka weyn tahay tan caadiga ah ee handarraabbadeedii madaxa laba geesoodka ahaa, sidaa darteed noocan noocan oo kale ah wuxuu u adkeysan karaa xoog-hor-u-adkaynta oo ka hortagaya Waxqabadka dabacsan ayaa sidoo kale wanaagsan, sidaa darteed waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa matoorada baabuurta, culus mashiinada iyo alaabada kale. Hexagon madaxa handarraabbadeedii oo leh godad iyo boosas madaxa ah. Markii la istcimaalo, handarraabbadeedu si farsamo ahaan ah ayaa loo xidhi karaa si looga ilaaliyo dabacsanaanta
Saddex, kala soocidda aasaasiga ah ee boodhadhka dhejiska
1. Hexagon madaxa ku xir fur god
Dalool jeex jeexan ayaa lagu sameeyaa fur si loo dhex maro daloolka silig birta ah, kaas oo si farsameysan loo furay, dabacsanaanta ayaa lagu kalsoon yahay
2. madax laba geesoodle ah oo dib loo rogay
Boolal leh godad reamed ayaa si sax ah u hagaajin kara booska wadajirka ah ee qaybaha isku xiran, waxayna u adkeysan karaan shilalka iyo xoqidda dhinaca jihada
3. iskutallaab iskudhaf ah oo madaxa laba geesood leh
Si fudud loo rakibo loona adkeeyo, inta badan loo isticmaalo warshadaha fudud, qalabka iyo mitirka oo leh culeys yar
4. laba jibbaar madaxa
Madaxa laba jibbaaran wuxuu leeyahay cabir ka ballaaran iyo dusha dhalid ballaaran, oo ku habboon fiiq-furka si uu madaxiisa u jaro ama ugu tiirsanaado qaybaha kale si looga hortago wareegga. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa qaybo leh T-slots si loo hagaajiyo booska booska. Class C bolts head square waxaa badanaa loo isticmaalaa dhismayaasha adag
5. handarraabbadeedii countersunk
Wareeg qoorta ama tenon ayaa leh shaqada joojinta wareegga, waxaana badanaa loo adeegsadaa munaasabadaha marka dusha sare ee qaybaha isku xiran looga baahan yahay inuu noqdo mid siman ama siman.
T-slot bolts waxay ku habboon yihiin munaasabadaha ay ku xirnaan karaan oo keliya hal dhinac oo ka mid ah qaybaha isku xiran. Ka dib markii boolku la geliyo T-slot ka dibna uu u wareego 90 digrii, boolku lama soo bixi karo; sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa xilliyada qaab dhismeedka looga baahan yahay inuu ahaado mid is haysta.
7. Barroosinka barroosinka waxaa si gaar ah loogu isticmaalaa aasaaska shubka horay loo aasay si loogu hagaajiyo saldhigyada mashiinnada iyo qalabka.
Badanaa waxaa loo isticmaalaa meelo iyo qalabaynta u baahan in si joogto ah loo jaro.
8. Boodhadh xoog-badan oo loogu talagalay isku-xidhka goos gooska ah ee shabaqa adag
Awood sare, inta badan loo isticmaalo jidadka waaweyn iyo buundooyinka tareenka, warshadaha iyo dhismayaasha madaniga ah, munaaradaha, wiishashka.
Kala soocida aasaasiga ah ee dhowr handarraabbadeedii flange laba geesoodka ah ayaa si gaar ah kor loogu soo qaaday. Kuwani waxaa loo sameeyaa iyada oo la raacayo shuruudaha ugu dambeeyay ee suuqa waxayna leeyihiin astaamo u gaar ah oo loo adeegsado. Tusaale ahaan, T-slot handarraabbadeedu waxay si fiican ugu xirnaan karaan qaabab kala duwan. Isla mar ahaantaana, qaybahan iyo qaybo kale ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa shaqsi madax-bannaan, sida qayb kasta ama isku-xirka tareenka, oo si xor ah loo dhaqaajin karo, si looga fogaado guntimaha ku dhinta isku xirnaanta oo ay u saameeyaan dayactirka iyo hawlgalka mustaqbalka. Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa isku xirka jawi warshadeed aad u kooban.
Hore: kiimikada barroosinka
Xiga: 304 316 ahama birta birta ahama ee balaadhinta balaadhinta Qiimaha ugu fiican
Barroosinka Ku Xidhitaanka Bolt
Boolal la taaban karo
M10 Masonry Screw Barroosinka
304 316 Ahama Ballaarinta Barxadda Barxadda ...